२०७१ भदौ २८ गते शनिबार | Saugat : Naya Yougbodh
Filed Under: काका र फुचुङ्ग्री | लल्लुराम
२०७१ भदौ २८ गते शनिबार
20th September 2014	·0Comments
फुचुङ्ग्री : हाम्रा देशका नेताहरुले त काका विश्वभरका जोकरलाई पनि हँसाएरै मार्छन् कि क्या हो ? राजनीतिक सम्मेलन त गर्ने रे । भदौ ३१ गते गर्ने कि असोज १ गते गर्ने भनेर चाहिँ कुरा मिलेन रे ! म त अब हाँसेरै मर्छु कि क्या हो ?
काका : अब त कुरा बुझिस् नि फुच्ची ? एक दिनअघि बैठक बस्ने कि एक दिनपछि भनेर त तेरा नेता अंकलहरुले निष्कर्ष निकाल्न सक्दैनन् भने यिनीहरुले देश चलाउलान् ? यिनीहरुले ठूला–ठूला निर्णय गर्न सक्लान् ? यिनीहरुले संविधान दिन सक्लान् ? अनि त्यत्रो मासिक तलब छोड्न सक्लान् ? तँ फुच्चीमात्रै होइन, हाँसेर मै बूढो पनि मर्छु कि क्या हो ?
फुचुङ्ग्री : राजनीतिक सम्वाद समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दा हाम्रा सभासद् अंकलहरुले अब पनि संविधान नबने आफूहरु जनताबाट असुरक्षित हुने चिन्ता गरेछन् । उनीहरुले अब आफूहरु संविधान नबनाएर मध्यरातमा लुरुलुरु ननिस्कने चेतावनी पनि दिएछन् हगि ?
काका : तेरा सभासद् अंकलहरु पनि के गरुन् त बिचरा ? “धान खाने मुसा, चोट पाउने भ्यागुता” भनेको यै त हो नि । तेरा नेता अंकलहरुले काम बिगार्छन् । त्यसको अपजस जति सभासद्हरुलाई । बिचराहरु “बलिका बकरा” नै बनेका छन् । त्यै भएर कस्सिएका त होलान् नि ।
फुचुङ्ग्री : अनि हाम्रा ड्यास माओवादीमा पनि त पदाधिकारी विवाद रै’छ नि ?
काका : किन नहोस् त फुच्ची ? त्यही पद नपाएर त छँदा खाँदाको पार्टी टुक्रा–टुक्रा पारे । त्यतिले नपुगेर पदकै लागि लडेर मर्नला’का छन् तेरा ड्यास माओवादी र क्यास माओवादीका अंकलहरु । यिन्का कुरा सुन्दा–सुन्दा त मै बूढाका कान पनि थाकिसके फुच्ची ।
फुचुङ्ग्री : हाम्रा कांग्रेसी अंकलहरुको पनि लडाइँ अच्छै चल्या’छ रे काका । सुशीलदा’ले देउवा र रामचन्द्र अंकलको सातो लिनु भो भन्ने हल्ला पो चलेको छ त ?
काका : उफ !!! के–के सोध्छे यो फुचुङ्ग्री पनि ???!!!